မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Prince of Persia - The sands of Time Movie
Posted by mabaydar at 1:12 AM
အဲဒီလို ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲ အဓိက ထား ကြည့်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်တိုင်တောင်မှ သရုပ်ဆောင်လို့ ရရင် ချချင်သေးတာ :P
5/28/2010 3:19 AM
သူငယ်ချင်းတွေမလိုက်လို့ ခုထိ မသွားရသေးဘူး
အခုလိုဆိုရင်တော့ သူတို့မပါလည်း ၁ယောက်ထည်း သွားကြည့်တော့မယ်... =)
5/29/2010 2:33 AM
နမူနာကြည့်ရကတည်းက ကြည့်မလို့စိတ်ကူးတယ်၊ ရုံမှာကြည့်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်၊
5/29/2010 11:51 PM
နမူနာနဲ့ အားမရလို့ရုံမှာ ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။။။ :)
I don't really like him in "The day after tomorrow". But he is so cool in this movie. :D